Shiinaha Qeybta leexashada koronto qaboojiye Cadeynaya LQ warshad nooca warshadaha iyo soosaarayaasha | Nortech
Waa maxay Qaybta leexinta korantada kiciyaha Caddaynta LQ?
Ugu horreyntii, waa nooc qayb ka mid ah leexleeyaha korantada, kaas oo kaliya u rogi kara bidix ama midig xagal ugu badnaan 300 ° .Qalabka soo-celinta iyo alaabooyinka kale ee la midka ah, sida baalal-balanbaalista, qasabadaha kubbadda, daar-gooyeyaasha, fureyaasha furayaasha, furayaasha xiisaha leh , iwm waa jiilka cusub ee shirkadeena waxaana loo isticmaali karaa wadista iyo xakameynta filtarka balanbaaliska, filtarka kubbadda lagu xiro iyo furayaasha fureyaasha (qaybta-leexashada leh 90 ° dhaqdhaqaaqa) .Waxaa la qabanayaa shaqooyinka kontaroolada maxalliga ah iyo kontoroolka fog labadaba.
Marka labaad, waa mid gaar ah oo loogu talagalay qarxinta deegaanka iyo meelaha halista ah, they waxaa si weyn looga isticmaalaa meelaha sida saliida, kimistariga, dhalinta quwadda, daaweynta biyaha, sameynta warqadaha, iwm.ilaalinta xayndaabku waa IP67, fasalka caddeynta qaraxuna waa d II CT6 (LQ1, LQ2) iyo d II BT6 (LQ3, LQ4, LQ4JS)
Astaamaha ugu muhiimsan ee Qeybta leexinta korantada korantada Qarxa Nooca LQ
● Guriyeyn: Aluminium adag oo aluminium ah iyo awoowe dibadeed oo dahaarka leh oo ka soo horjeedda deegaanka warshadaha daran.
● Gearing: Si sax ah loo farsameeyay marsho dixir leh laba jeer C / W buuqa ugu yar ee madow-lashjow, mashiinka wax soo saarka sare.
● Is-qufulka: Bixiyay dirxi laba-geesood ah si loo ilaaliyo booska waalka oo aan isbeddelin marka loo eego isku-darka gadaal ee ka soo baxa waalka.
● Mashiinka: Mashiinka si gaar ah loogu talagalay iyo soo-gelinta soo-saarista si loo abuuro awood-bilow sare iyo hufnaan sare oo lagu qalabeeyo ilaaliyaha kuleylka si looga hortago waxyeellada ka soo gaarta kuleylka.
Sto Qalab joojiye dibadeed: Wuxuu ka hortagaa socodsiinta xagasha safarka marka xaddidaadda xaddidan ay xumaato.
Que Wareegyada Xuddunta: Ka ilaali dhaq-dhaqaaqa waxyeellada ka dhalatey culeyska xad dhaafka ah ee ka saaran waalka la socda ee safarka oo dhan, 1 kasta oo furan ama u dhow.
● Xaddid beddelka: Si toos ah ugu hawlan mashiinka wadista si loo dejiyo booska saxda ah ee waalka, oo keenaya calaamadda xiriirka qalalan.
● Terminal: Xilliga gu'ga oo la rakibayo nooca riixista ee isku xirka fiilooyinka ku xiran gariirka daran.
Heater Kulayliyaha hawada sare: Uumeysta uumiga.
R Xadgudubka Buugga: Feejignaanta Wareejinta Gawaarida / Buugga iyo ku lug lahaanshaha gacan-qabashada ee hawlgalka gurmadka degdegga ah.Ku qas xoogga si toos ah ugu biloow bilowga mootada, ilaa kabaalku uu xirmo mooyee si looga hortago tan oo kale.
Whe Gacan-ku-wareejinta: Buug gacmeed lagu shaqeeyo. Si toos ah ugu xir waalka dabka markii korantadu demiso.
Identify Si otomaatig ah u aqoonsado isku xigxiga Wajiga, ilaalinta waji-darrada wajiga.
Class Qaybta Danab ee DC24V ee kontoroolka fog.
Iring Habka fiilooyinka habboon ee dabacsan.
Xullaha oo leh naqshad lama huraan ah si loo hagaajiyo shaabbada jiheeyaha.
Situation Xaaladda shaqaynta oo lagu muujiyey shan calaamadood oo qallalan si loola socdo nidaamka DCS.
La socodka calaamadda cilladda guud ee gudbinta gudbinta ee nidaamka DCS.
● Xullaha ayaa xirxiray si waafaqsan shuruudaha si looga hortago hawlgalka fashilka.
Faahfaahinta farsamo ee Qaybta leexinta korantada kiciyaha Qaabka Caddaynta LQ
Bandhigga Badeecada: Qaybta leexinta koronto-dhaliyaha Qarxa Nooca caddaynaya LQ
Codsiga Badeecada: Qaybta leexinta koronto-dhaliyaha Qarxa Nooca caddaynaya LQ
Qeybta leexashada koronto-dhaliye qarxinta nooca LQwaxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu xakameeyo filtarka oo uu ka kooban yahay walxaha korantada, gaar ahaan meelaha halista ah iyo waxyaabaha qarxa, Waxaa lagu rakibi karaa fureyaal Rotary ah, filtarka kubbadda, filtarka balanbaaliska, qashin qubka, qasabadaha wax lagu xiro, qalabka wax lagu xiro, iwm. halkii laga heli lahaa xoog dhaqameed si loo xakameeyo wareegga waalka si loo xakameeyo hawada, biyaha, uumiga, warbaahinta kala duwan ee wax daaqaysa, dhoobada, saliida, biraha dareeraha ah iyo warbaahinta shucaaca, ee loogu talagalay meelaha halista ah lana kulmo heerka UL 1203. Dhaqdhaqaaqayaashu waa kuwo adag oo lagu kalsoonaan karo oo leh aluminium aluminium anodized ah oo loo adeegsaday saliida, gaaska, kiimikada & codsiyada soo saarida tamarta.
Hore: Qaybta leexashada Korantada Korantada
Xiga: Dhaqdhaqaaqa korantada ee badan